Taageero khuseysa adiga oo ka qeyb qaata barnaamijka la qabsiga/dejinta dalka
Barnaamijkan la qabsiga dalka waa mid aad ka qeyb qaadan karto oo waana waxqabadyo waxtar leh sida barashada af-ka iswiidhishka oo ka baran karto, ama aad ku heli karto shaqo si aad isugu filnaato.
Taageero loogu tala galay adigaaga muddo dheer ka maqnaa suuqa shaqada, oo aan hubin kartidaada shaqo iyo shaqada kugu habboon.
Barnaamij leh dhaqdhaqaaqyo iyo tababarro loogu talagalay, qaar kamid ah soo-gaaleetiga dhowaan dalka yimi, taasoo ulajeedadeeda tahay in sida ugu dhaqsida badan aad af-iswiidish ku barato, shaqo ku hesho iyo isku filnaasho dhaqaaleed.
Adigaaga ku cusub Iswiidhan ee ka qaybqaata barnaamijka saldhigashada waxaad xawaare sare wax ku baran kartaa ama tababar ku samayn kartaa goob shaqo. Adigu waxaad tan samaynaysaa wakhti buuxa iyo in xilli firaaqaha si aad dhakhso u hesho shaqo.
Waajibka waxbarasho wuxuu khuseeyaa adigaaga ka qayb-qaadanaya barnaamijka sal-dhigashada ee haysta waxbarasho kooban. Tani micnaheedu waa inay khasab tahay inaad wax barato si aad u kordhiso fursadahaaga inaad hesho shaqo.
Si aad kor ugu qaaddid fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid waxaad kartidaada aqoon-iyo xirfadeed ku dhisi kartaa waxbarasho jaamacadeed ama mid ka sarreysa heerka dugsiga sare. Haddii aad Swiidhan ku cusubtihid, aadna leedihid xirfad ay jirto baahi aad u weyn oo shaqaale loo qabo waxaa sii jira fursado aad fara badan.
Ansaxin waxay ka dhigantahay in kartidaada aqoon-iyo khibradeed laguu qiimeynayo. Waxay taasi khuseysaa aqoonta aad waxbarasho ku kasbatay, tan aad suuqa shaqada ka kasbatay iyo tan nolol maalmeedka.